नोरा फतेही र उर्वशी रौतेला गाउनमा TH 66 औं फिल्म फेयर अवार्ड - PAMPEREDPEOPLENY.COM - फेसन
फिल्मफेयर पुरस्कार: नोरा फतेही र उर्वशी रौतेला हामीलाई चम्किलो गाउनमा उनीहरूको आश्चर्यजनक देखिन्छ
घर फेसन बलिउड अलमारी बलिउड वार्डरोब आयुषी अधौलिया द्वारा आयुषी अढौलिया | मार्च ,०, २०२१
Th 66 औं फिल्म फेयर अवार्डमा धेरै बलिउड सेलिब्रिटीहरू तिनीहरूको भव्य गाउनमा चम्किरहेका थिए। यद्यपि यो नोरा फतेही र उर्वशी रौतेला हुन् जसले चहकिलो गाउनमा रेड कारपेटलाई आगोमा हालेका थिए। जबकि नोरा धातुको सुनौलो गाउनमा छक्क परे, अर्कोतर्फ उर्वशीले स्टाइलिश क्रिमसन रेड सेक्विन गाउनको लागि रोजे। दुबै दिभास एकदम ग्लैमरस देखिन्थे। त्यसोभए हामी उनीहरूको एटिएरसलाई नजिकबाट हेरौं र यसलाई डिकोडौं।
एक धातुको गोल्डन गाउनमा नोरा फतेही
नोरा फतेही जर्जेस चक्र लेबलबाट आएको एउटा बाछोको घाँटी काउल नेक मेटलिक गोल्डन गाउनमा मार्ने लुगा लगाइएको थियो। उनको बडी-अug्गाई गाउन ओभरल्याप विवरणको साथ एक बेर्ने तह र तीखो pleats तलको द्वारा accentuated थियो। मानेका हरिसिhani्गनी द्वारा स्टाइल गरिएको, फिलाको छेउको छेउछाउ र छोटो ट्रेनले उनको लुकमा स्टाइलिश क्वाइन्ट थप्यो। उनले क्रिश्चियन लुउबुटिनको हाई हिल्सको जोडीले आफ्नो लुक पूरा गर्नुभयो। डिवाले उनको हेराई हरियो झुम्का र रेणु ओबेरॉयको लेबलबाट घण्टीहरू लगाउँछिन्। नोराले उनको छेउमा विभाजित भारी घुमाउरो लकहरू छोडिदियो र भरिएको ब्राउज, कोहल्ड आँखाहरू, आँखाको छाया र गुलाबी ओठ छायाको साथ उनको हेराइ बढायो।
एक क्रिमसन रेड सेक्विन गाउनमा उर्वशी रौतेला
फिल्मफेयर पुरस्कार २०२१ को लागि, उर्वशी रौतेला एक स्लीवलेस क्रिमसन रेड सेक्विन गाउनको लागि रोज्नु भयो जुन मोनिशा जयसिंगको लेबलबाट आएको हो र यसको लागत INR 70K छ। उनको शरीरलाई अug्गाल्ने मरमेड गाउनमा दुई स्कार्फ-प्रकारको टुक्रा रहेको थियो - एउटा उनको घाँटीमा बाँधिएको थियो भने अर्को उनको कम्मरमा लपेटिएको थियो। छोटो ट्रेन उनको स्टाइलिश क्वान्टिएन्ट थप गर्छिन् र उनले आफ्नो हेल्स को एक जोडीको साथ पूरा गरे। डिभाले धेरै कंगन र चूलीहरू, र रिंगहरू प्रयोग गरी। उनले आफ्नो मध्यम-विभाजित स्लीक ट्रेसहरू छोडिदिइन् र भरिएको ब्राउज, गुलाबी आँखाको छाया, मस्काराको साथ लेपित झूठी आँखाहरू, र ओठको चमकको साथ मरुन लिप टिन्टको साथ आफ्नो नजर उठाइन्।
हामीलाई नोरा फतेही र उर्वशी रौतेलाको गाउन एकदमै मनपर्‍यो। तपाइँ यसको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि टिप्पणी सेक्सनमा।
पिक क्रेडिट्स: इन्स्टाग्राम
मरेका आफन्तहरुसँग कुरा गर्दै गरेको सपना देख्दै
मूत्र मा पुस कोशिका को लागी
हनुमान चालिसा १० 108 पटक पढ्ने प्रक्रिया
किन हामी खाएपछि निन्द्रा लाग्छ?
कसरी फलामको बक्स दाग हटाउने